Mo Farah oo billad dahab ah hantiyay - BBC News Somali
Mo Farah oo billad dahab ah hantiyay
28 Luulyo 2010
Image caption Mo Farah oo ku guulaystay orodka tobanka kun mitir ee Yurub
Dalka Britain waxaa marki ugu horreysay taarikhdiisa uu ku guleystay orodka tobanka kun ee mitir tartamada ciyaaraha fudud ee qaaradda Yurub.
Guushaas waxaa u soo hooyey, Maxamed Faarax, wiil Soomaaliyeed oo heysta dhalashada Britain, oo ku guleystay billadda dahabka orodka tobanka kun ee mitir ee ka dhacay magaalada Barcelona dalka Spain, halkaasi oo ey ka socdaan tartamada ciyaaraha fudud ee qaaradda Yurub.
Tartankii xalay ka dhacay gegida Barcelona Maxamed Faraax waxaa uu ku bilaabay si tartiib. Isago kalsooni badan ka muuqaato, ayaa waxaa tartanka intiisa badan uu kaga jiray meelaha dhexe. Mar dambe ayuu u soo jeestay in meelaha hore ka galo. Waxaana kunkii mitir ee u dambeeyey la sinnaa wiilka ka socday Spain Ayad Lamdassem.
Haseyeeshe, markii saddex boqol oo mitir ey ka dhinneed dhammatka, ayaa Maxamed Faarax, waxa inta dhinacyada iska fiiriyey uu xuf ku dhaafay Ayad Lamdassem.
Isagoo aad moodid inuu biibaayo oo si qurux badan oo cajaa’ib eh u ordaaya oo ey wada sacbinayaan dadkii ku sugnaa gegida, ayuu ku guuleystay tobanka kun ee mitir, isago ku orday 28 daqiiqo iyo 24.99 sekend.
Kaalinta labaadna waxaa galay wiil kale oo Britain ka socday Chris Thompson. Kaalinta saddexaadna orodyahanka Talyaaniga Daniele Meucci.
Guushi xalay waa mid ey xusuusandoonto Britain, maxaayeelay xalay ka hor waligeed ma dhicin in Britain ey guul ka soo hoydo orodada tobanka kun ee mitir tartamada ciyaaraha fudud ee Yurub.
Maxamed Faraax oo ah wiilka guusha Britain soo hooyey waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho 1983. Waxaana dalka Britain uu u soo guuray sannadkii 1993.
Ciyaaraha orodada waxa uu ku bilaabay dugsiyada u dhiganaayey kaddib markii macalinkiisa qeybta jimicsiga iyo ciyaaraha uu dareemay in uu yahay wiil door weyn ka qaadan kara orodada.
Waxaana Maxamed tartamadiisa u horreeyey uu ka qeybgalay isago 13 jir ah. Kaddib waxa uu ka qeybqaatay tartamo kala duwan, oo qaar uu ku badiyey kuwa kalena uu kaalima kala duwan ka galay.
Bishii shanaad ee May ee sannadkakan waxa uu jabiyey rekoorka Britain ee tobanka kun ee mitir, isago ku orday 27 daqiiqo 44 sekend. Bishii xigtayna ee June, waxaa uu ku guleystay tartanka Yurub ee tobanka kun ee mitir isago markakan ku orday 27 daqiiqo 28 sekend.
Xalayna waxa uu noqday wiilka sita horyaalnimada qaaradda Yurub ee tobanka kun ee mitir.